Laser Cutting Machine, Laser sokitra Machine, Galvo Laser Machine - Golden Laser
Machine milina famonoana dizitaly
Tonga soa eto amin'ny Golden Laser
Volamena tamin'ny laser dia mifantoka amin'ny fanomezana manan-tsaina, Hafanàm-po an, ka mandeha ho azy tamin'ny laser vahaolana.
Mpanamboatra ny tamin'ny laser rafitra noho ny fanapahanao, sokitra ary nanamarika. Ny manam-pahaizana manokana ao amin'ny CO2 tamin'ny laser fanapahana milina sy Galvo tamin'ny laser milina.
Avy voalohany Consulting ny fampiharana fitsirihana natao miaraka amin'ny fitaovana ao amin'ny orinasa ny fampiofanana manokana ho an'ny mpampiasa sy ny asa fanompoana maneran-tany - Golden Laser manome vahaolana tamin'ny laser feno, tsy milina iray!
CO2 tamin'ny laser CUTTER
Model No. .: JMCCJG / JYCCJG Series
Mamatonalina vita amin'ny lamba vita amin'ny lozisialy avoaka
Ity andiany CO2 sela fampihenana vita amin'ny laser ity dia natao ho an'ireo horonana matevina sy fitaovana malefaka mandeha ho azy ary manapaka tsy tapaka. Atosin'ny fitaovam-pandehanana sy motro miaraka amin'ny motera servo, ny mpamatsy laser dia manolotra ny haingam-pandeha ambony indrindra sy haingam-pandeha.
Model No. .: JMCCJG-350400LD
CO2 Laser Cutter ho an'ny fanenonana lamba fanatanjahantena fanatanjahan-tena
Fitaovana maotera sy fako avo lenta. Fahatapahana haingana hatramin'ny 1200mm / s. CO2 RF laser 150W hatramin'ny 800W. Rafi-pandefasana vakoka. Fiombohana fiara miaraka amin'ny fanitsiana fihenjanana. Mety tsara amin'ny fanendahana lamba lamba, ny lamba vita amin'ny lamba, polyester, PP, fiberglass, PTFE ary lamba indostrialy.
Model No. .: JMCZJJG (3D) -250300LD
Lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba
Ny fitambaran'ny format X, Y axis laser cut (trimming) sy ny hafainganam-pandeha ambony indrindra Galvo laser perforating (laser cut hole). Izy io dia natao ho fanapaka ny rindrina fihodinana amin'ny lamba (sock duct, vovoka sox, duct sox, sock sock, trafika rivotra mifono rivotra, sock rivotra, rivotra iainana)
Model No. .: JMCCJG-250300LD
CO2 Laser Cutting Machine ho an'ny teknika ara-teknika
Ny fitaovana sy fitoeran'entana entin'ny tamin'ny laser fanapahana milina matanjaka ampy ny manao fahefana avo tamin'ny laser CO2 fantsona. Tsy mahatsapa avo faran'izay haingana sy ny fanapahana haingana amin'ny manidina haingana ny hazavana.
Model No. .: JMCZJJG (3D) 170200LD
Galvo & Gantry Laser Fitaovana fanoratana milina ho an'ny lamba, hoditra
Ity rafitra laser ity dia mitambatra galvanometer sy XY gantry. Ny Galvo dia manolotra fanodinana haingam-pandeha haingana, fanodikodinana, fanapotehana ary fanendahana fitaovana manify. XY Gantry dia mamela ny fametrahana ny mombamomba kokoa sy tahiry matevina.
Model No. .: ZJJF (3D) -160LD
Ankino ny Ankino manidina Fabric Laser sokitra Machine
3D mavitrika Galvo rafitra, vita sokitra mitohy nanamarika tamin'ny dingana iray. "Ny lalitra" tamin'ny laser teknolojia. Mety amin'ny endrika lehibe lamba, lamba, hoditra, denim, EVA sokitra.
Model No. .: ZJ (3D) -9045TB
High Speed ​​Galvo Laser sokitra Machine for Leather Shoe
CO2 RF vy tamin'ny laser 150W 300W 600W. 3D mahery rafitra fanaraha-maso galvanometer. Automatic ka nidina Z mpiray. Automatic mivezivezy fanitso-vy firaka toho-tantely miasa latabatra.
Model No. .: ZJ (3D) -15050LD
Galvo Laser Fanamboarana milina fanendahana ho an'ny takelaka sandasy abrasive
Rafitra fametrahana galvanom-paritra lehibe. Loharanom-baovao laser maromaro hampitomboana ny vokatra. Famahana sy fanodinana miverimberina - conveyor ...
Model No. .: CJGV-160130LD
Sublimation lamba vita amin'ny Laser Cutter ho an'ny fanatanjahan-tena
Vision tamin'ny laser dia tsara noho ny fanapahanao nomerika fanontam-pirinty sublimation damba lamba ny endriny sy halehibeny samihafa ireo fitsapana rehetra. Fakan-tsary banjino ny lamba, mamantatra sy manaiky pirinty contour, na hitondra marika eo amin'ny fisoratana anarana vita pirinty sy manapaka ny teti-dratsy voafidy amin'ny hafainganam-pandeha sy ny marina tsara.
Model No. .: QZDXBJGHY-160100LDII
Mantsary fahana fahitalavitra tsy miankina amin'ny fahitalavitra tsy miankina
Ny tsy miankina roa loha fanapahana tamin'ny laser rafitra tonga lafatra mitambatra amin'ny fahitana rafitra manan-tsaina, ary koa optimisé amin'ny fitakiana ny fanodinana sary vita pirinty.
Model No. .: MZDJG-160100LD
Laser Cutter fakan-tsary GoldenCAM
Fametrahana mazava tsara marika avo fisoratana anarana sy ny mahira-tsaina toerany deformation onitra ho marina tsara tamin'ny laser hamboatra loko sublimation pirinty Logos, taratasy sy isa.
Model No. .: CJGV-320400LD
Format Wide Laser Cutting Machine ho an'ny Flags, Banners, Soft Signage
Ny fahitana lehibe tamin'ny laser cutter dia manokana ho an'ny orinasa pirinty nomerika - famokarana manam-paharoa fahaiza-manao ho an'ny endrika nomerika malalaka vita pirinty na loko-damba sublimated sary, sora-baventy sy malefaka signage.
Model No. .: LC-350
Mihodina amin'ny Rolling Laser Die Cutting Machine
Famonoana laser tsy misy ilana ary manova vahaolana ho an'ny famandrihana marika. Ny mpamaky kaody QR dia manohana fanovana mandeha ho azy amin'ny sidina. Babayin'ny BST Web dia mahitsy kokoa ny tsy milamina sy miverimberina.
Model No. .: LC-230
LC230 dia milina famandrihana laser maoderina, ekonomika ary feno tanteraka amin'ny halavan'ny tranokala farany indrindra. Safidy tsara ho an'ny hazakazaka fohy digital io. Manolotra fiovan'ny aotra amin'ny fotoana maharitra ary tsy misy vidiny maty.
Manome vahaolana avy amin'ny teknolojia laser izahay. Safidio ny indostrianareo: ny vahaolana laser mety indrindra aminao
Hoditra & SHOES
Miaraka amin'ny fanavaozana ny teknolojia mafy, Golden Laser dia afaka manome namboarina tamin'ny laser milina sy ny vahaolana, hahatonga ny famokarana mahomby kokoa sy mahasoa.
Araka ny fepetra lehibe manao fanavaozana ara-teknolojia, tamin'ny laser dia mivoatra miaraka amin'ny tombontsoa tsy manam-paharoa, fanoloana bebe kokoa dingana nentim-paharazana.
Laser Systems Bokikely
Laser Systems User Boky Torolàlana
momba ny Golden Laser (PDF amin'ny teny)
Hatrany manome service fanohanana. Injeniera misy ny fanompoana ampitan-dranomasina noho ny fametrahana fitaovana fanompoam-pivavahana, asa fanompoana sy fikojakojana fampiofanana fanompoana.
Fampandrosoana ny fiaramanidina anatiny - Seza fiaramanidina
Ny teknolojia fanodinana laser dia nanjary matotra tsikelikely ary be mpampiasa amin'ny fiara, fiaramanidina ary ny lamba sy ny saha mitambatra. Ny rafitra laser dia hitondra anao tokoa amin'ny asa fanodinana tonga lafatra sy tombontsoa lehibe.
Ny safidy tsara kokoa ho an`ny fananganana acrylic & sokitra - Rafitra laser
Ny famafazana sy ny fanoratana laser no fomba fiasa mety amin'ny acrylic. Sambo mamirapiratra sy madio ary lelafo no vita. Masinina milina avo lenta. Mety tsara amin'ny fanodinana ireo endrika sy endrika isan-karazany.
Fametrahana mazava tsara Manufacturing Fitadiavana Excellent
Laser Solutions Mitarika Provider
Network varotra Global
By 20 taona tamin'ny laser traikefa amin'ny orinasa, mivoatra hatrany ary mampiasa mandroso ny teknolojia, Golden Laser nanjary mpitarika ny tamin'ny laser mpanamboatra milina be pitsiny customization amin'ny fahaizany.
Laser Golden manome anao matihanina tamin'ny laser vahaolana ho an'ny orinasa fampiharana manokana - mba hanampy anao hampitombo ny famokarana, sy ny fomba fikarakarana hanatsorana ho tombony bebe kokoa.
Ao amin'ny tsena any ampitan-dranomasina, dia nametraka Golden Laser matotra tambajotra barotra mihoatra ny 100 ao amin'ny firenena sy faritra eran-tany, miaraka amin'ny vokatra sy ny tsena mifaninana-mirona fanavaozana rafitra.
Copyright © 2005-2020 Wuhan Golden Laser Co, Ltd Zo rehetra voatokana.